ဆွေးနွေးချက်:ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ အပိုင်း-၃ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ The neutrality of this article
၂ User talk:Thitmg
၃ Do Not Copy Directly form Books
၄ Long Time No See
၅ October 2013
The neutrality of this article[ပြင်ဆင်ရန်]
The following discussion is an archived debate of the neutrality of the article. The article was created by User:Thitmg.
ကျေးဇူးပြုပြီး စာအုပ်တွေကို တိုက်ရိုက် ကော်ပီကူးပြီး မတင်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တည်းဖြတ်ပြီး တင်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့ အတွက် ဝီကီပီးဒီးယား ပေါ်လစီ အရ ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဝင်ရောက် ကူညီပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ Zawthet (talk) ၁၉:၅၁၊ ၂၈ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၃ (UTC)
Do Not Copy Directly form Books[ပြင်ဆင်ရန်]
Please do not copy directly from books. Please read this article Wikipedia:About. Thank you for your distribution --Battoe19 (talk) ၁၅:၁၁၊ ၈ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၃ (UTC)
ပုံနှိပ်သူမှတ်ပုံတင်အမှတ် (ဝ၇၄၂၅)ဖြင့် ပုံနှိပ်၍ ထုတ်ဝေသူ မှတ်ပုံတင်အမှတ်(ဝ၃၇၅၅)ဖြင့် ဖြန့်ချိ ထုတ်ဝေထားသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ြဖင့်
ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်.. လာရောက်ကူညီပေးမူကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်.. Thitmg (talk) ၁၀:၁၈၊ ၉ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၃ (UTC)
Long Time No See[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗိုလ်ကြီးရေ အခုရှမ်းပြည်မှာလား။ ဒါနဲ့ ရုံးဖွင့်ရက်မှာပဲ ဝီကီသုံးဖြစ်တာလား။ ရုရှားကပြန်ရောက်တည်းကမတွေ့ဖြစ်ဘူး။ Bill48 (talk) ၁၈:၅၁၊ ၁၂ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၃ (UTC)
Welcome to Wikipedia. It might not have been your intention, but your recent edit removed maintenance templates from Wikipedia. When removing maintenance templates, please be sure to either resolve the problem that the template refers to, or giveavalid reason for the removal in the edit summary. If this wasamistake, don't worry, as your removal of this template has been reverted. Takealook at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia, and if you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၀:၂၁၊ ၁၆ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၃ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊_အပိုင်း-၃&oldid=291683" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။